EDuke32: Etu esi etinye ma kpọọ Duke Nukem 3D na GNU / Linux? | Site na Linux
EDuke32: Etu esi etinye ma kpọọ Duke Nukem 3D na GNU / Linux?
Maka taa, ụbọchị mbụ nke June, anyị na-eweta egwuregwu ọzọ dị egwu nke oge gara aga maka ihe ụtọ anyị, nke na-atọ ụtọ ma na-eto eto Ndepụta egwuregwu na Gen Fps (Onye mbụ na-agba ụta) kedu ihe anyị ga-eji egwu GNU / Linux. Ma nke a abụghị onye ọzọ karịa ochie na ụwa maara Duke Nukem 3D n'aka nke "EDuke32".
"EDuke32" bu ihe di omimi nye ndi n’eme onwe ha Ndị egwuregwu nke "Old School", nwere ike igwu egwu di egwu ma kpochapu Egwuregwu Fps na GNU / Linux, dochie Windows 95/98, site n'oge ọlaedo ahụ nke egwuregwu 16/32 Bit.
Mbibi: Etu esi egwu egwu Rome na ụdị egwuregwu FPS ndị ọzọ yiri GZDoom?
Maka ndị hụrụ ya n'anya Egwuregwu na Linux, na karịsịa maka Ndị na-egwu egwuregwu Fps nke "Old School", anyị ga-ahapụ gị n'okpuru ụfọdụ n'ime ihe ndenye ọhụrụ metụtara anyị gbasara Rome na egwuregwu ndị ọzọ yiri ya:
"GZDoom bụ otu n'ime ọdụ ụgbọ mmiri 3 dị ugbu a nke ZDoom, nke bụ ezinụlọ nke ọdụm ọdụ ụgbọ mmiri nke mbubata mbibi maka usoro arụmọrụ nke oge a. Pgbọ mmiri ndị a na-arụ ọrụ na Windows, Linux, na OS X nke oge a, na-agbakwunye atụmatụ ọhụrụ anaghị ahụ na egwuregwu nke Id Software bipụtara na mbụ. Enwere ike iji kesaa ọdụ ụgbọ mmiri ochie ZDoom na kesara n'efu. Enweghi uru obula site na ire ya. GZDoom na ụmụ ya dị ka nke mbipute 3.0.0 nwere ikikere n'okpuru GPL ma dabere na usoro na mmachi nke ikike ọhụrụ ahụ." ¿Etu esi egwu egwu Rome na egwuregwu FPS ndi ozo yiri ya site na iji GZDoom?
Quake3: Etu esi wụnye ma jiri kpochapu Fps Game a na GNU / Linux?
Wolfenstein - Agụba nke Obi ụta: Ọhụrụ mbipute 3.0 dị maka GZDoom
1 EDuke32: Duke Nukem 3D maka GNU / Linux
1.1 Gịnị bụ EDuke32?
1.3 Nbudata, nwụnye, jiri na nseta ihuenyo
EDuke32: Duke Nukem 3D maka GNU / Linux
Gịnị bụ EDuke32?
Dị ka ndị mmepe ya si dị ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị, "EDuke32" es:
"Nnukwu egwuregwu egwuregwu ụlọ na-enweghị atụ na mmegharị nke egwuregwu mbụ nke onye na-agba égbè maka PC akpọrọ Duke Nukem 3D (Duke3D), maka Windows, Linux, Mac OS X, FreeBSD, ngwaọrụ dị iche iche enwere ike, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ. Na mgbakwunye, anyị atụkwasịla ọtụtụ puku ihe bara uru na nke na-adọrọ mmasị na mmelite maka ndị na-egwu egwuregwu oge niile, yana ike ntinye ederede na ndọtị ndọtị maka ndị mmepe ụlọ na ndị okike mod. EDuke32 nweere onwe ya iji ngwanrọ mepere emepe maka ebumnuche na-abụghị nke azụmahịa."
N'etiti ọtụtụ atụmatụ, ọrụ na ozi ọma ihe gụnyere "EDuke32", ndị na-esonụ 10 nwere ike kwuru:
Eduke32 nwere ikike n’okpuru GNU GPL License na License BUILD.
Ọ na-arụ ọrụ nwaafọ na-enweghị dabere n'ụdị nomi ọ bụla.
Ọ na-agba na mkpebi dị elu, dị ka: 3072 x 2304.
Na-ahapụ gị ịhọrọ n’etiti ngwaike abụọ dị iche iche na-eme ka ndị OpenGL megharịa ọsọ, ma ọ bụ ọnọdụ sọftụwia mebiri emebi ị tolitere.
Ọ na - edozi ọnya nzuzu nke ahụhụ ndị na - adịghị njọ n'oge DOS, mana ha na - egbu egbu na ụdị nke nchekwa echekwara n'oge a. N'ihi ya, EDuke32 dara karịa nke mbụ.
Ọ bụ ugbu a bụ naanị ọdụ ụgbọ mmiri nke Duke3D na-arụsi ọrụ ike na-echekwa ruo ọtụtụ afọ.
Ọ na-egosipụta nsụgharị "Polymer" dị ịtụnanya Plagman, nke na-anọchi nsụgharị "Polymost" nke Ken Silverman.
Ọ nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke mgbakwunye ọhụrụ na sistemụ egwuregwu nke egwuregwu, na-enye ohere maka mods egwuregwu nke na-ama egwuregwu ọbụna egwuregwu ọgbara ọhụrụ aka.
Jiri HRP rụọ ọrụ na nkwado maka atụmatụ niile, ọtụtụ n’ime ha chọrọ EDuke32; ọ dịghị ọdụ ụgbọ mmiri ọzọ dị ugbu a nwere ike iji HRP niile rụọ ọrụ.
Tinye ihe njikwa agba zuru ezu, gụnyere njigide igodo Quake, iwu aha, imecha taabụ zuru oke, akụkọ iwu zuru oke, ederede agba na ọtụtụ ndị ọzọ.
Cheta na: Ọ na-abịa naanị n'asụsụ Bekee.
Nbudata, nwụnye, jiri na nseta ihuenyo
Iji budata ya, naanị ị ga-aga ihe ndị a njikọ na budata faịlụ dị ugbu a a na-akpọ:
Site na nke a njikọ, faịlụ aha ya:
Maka ntinye ya, ị ga - ewepu faịlụ ahụ «eduke32_src_20210629-9443-33e98f55a.tar.xz» na n'ime unzipped nchekwa kere ị ga-idetuo faịlụ "Duke3d.grp". Mgbe ahụ, ọ ga-achịkọta, iji mepụta executable site na iji iwu na-esite na folda nke nrụrụ ahụ mepụtara:
Maka iji ya (ogbugbu), ọ bụrụ na mkpokọta nke ọma, naanị iwu ndị a kwesịrị ime:
Maka iji ya mee ihe bara uru, a na-atụ aro ka ịnyegharị aha folda ahụ abanyeghị na ya "Eduke32". Ọ bụrụ na mkpokọta ma ọ bụ mkpokọta na-enweghị isi, gbalịa ịwụnye nchịkọta ndị a tụrụ aro:
para ozi ndị ọzọ banyere nwụnye na ojiji nke "EDuke32" banyere iche iche Sistemụ arụmọrụ, na iche iche Nkesa GNU / Linux akwado, nweta njikọ ndị a na gị Wiki:
Owuwu EDuke32 na Linux
Cheta na: N'ihi na anyị bara uru ikpe, anyị na-eji Weghachite Linux akpọ Ọrụ ebube GNU / Linux nke dabere na MX Linux 19 (Debian 10), ma wuo ya na esochi nke anyi «Na-eduga na Snapshot MX Linux».
"EDuke32 bụ eze na-enweghị mgbagha nke ọdụ ụgbọ mmiri Duke Nukem 3D."
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «EDuke32», nke bu egwuregwu egwuregwu free n'ụlọ na mmegharị nke kpochapụwo onye mbụ shooter egwuregwu n'ihi na PC na-akpọ Duke Nukem 3D; bụ nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » EDuke32: Etu esi etinye ma kpọọ Duke Nukem 3D na GNU / Linux?
Na dị ka mgbe niile na-enweghị nyocha ọ bụla nke asụsụ ndị dịnụ.
Daalụ, Bravo. Daalụ maka okwu gị na nyocha gị. Emela, gbakwunyere ederede: «Cheta: Ọ na-abịa naanị na Bekee, na atụmatụ ngalaba.»
Ebee ka ọbaakwụkwọ dị?
Daalụ, Deadpool. Daalụ maka okwu gị. Kedu ọbaakwụkwọ (faịlụ) ị na -ekwu maka ya? Agbalịrị m naanị usoro nrụnye niile yana ọ na -arụ ọrụ nke ọma. Ma ọ bụ ị pụtara akụkụ nke egwuregwu nke gụnyere Ọbá akwụkwọ?
Deepin na-agbaso usoro nke Windows 11 na ngwa gam akporo nwere ike itinye site na Storelọ Ahịa ya
June 2021: Ihe ọma, ihe ọjọọ na ihe na-adọrọ mmasị nke Software efu